ဥပဒေသုံးဆိုတဲ့ သပွတ်အူ အသုံးအနှုန်းများ (Lamentable Legalese by Tom Hayton) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network on February 10, 2012 at 10:17 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
စာရေးသူ မကြာခင်က အိမ်ပြောင်းပါတယ်။ အိမ်ငှားစာချုပ် လက်မှတ်ထိုးရပါတယ်။ စာချုပ်ကို ရေးထားတာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့တော့ ဟုတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် မွေးကတည်းက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို ပြောလာပြီး တက္ကသိုလ်မှာ စာပေအခြေပြု ဘာသာတွဲနဲ့ ဘွဲ့ရခဲ့တဲ့အပြင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား သင်တဲ့ဆရာလုပ်တာလည်း အတွေ့အကြုံအတော်ရှိခဲ့တဲ့တိုင်အောင် စာရေးသူအနေနဲ့ စာချုပ်ကို နားလည်အောင် အတော်ကြိုးစား ဖတ်ရတယ်။
အိမ်ငှားချင်တာကို “desirous of tenanting said premises” (အဆိုပါ ပရ၀ုဏ်တွင် ငှားရမ်းနေထိုင်လိုသော ဆန္ဒရှိကြောင်း) ဆိုတာမျိုး ရေးထားတယ်။ “hereto” (ဤစာချုပ်စာတမ်းသို့)၊ “forthwith” (နှောင့်နှေးကြန့်ကြာချင်းမရှိစေဘဲ) ချက်ချင်း ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေလည်း အများကြီးဘဲ။ ရှည်မှရှည် ဝါကျတွေကိုလည်း အများကြီး သုံးထားတယ်။
ဘယ်လိုကြည့်ကြည့် လူနားမလည်အောင် ရေးထားတာဘဲဖြစ်နေတယ်။ ပညာတတ် တစ်ယောက် ဖတ်လည်း နားမလည်နိုင်ဘူး။ ဥပဒေသုံးဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
စာရေးသူလိုမျိုး မကျေမနပ် ပြောတာ အသစ်အဆန်း မဟုတ်ပါဘူး။ နှစ်ဦးသဘောတူ စာချုပ်တွေကို ဖတ်ရခက်အောင် ရေးရတယ်လို့ တစ်လွဲ ထင်မြင်ယူဆနေကြသူတွေ ရှိတယ်။ ဥပဒေ အရေးအသား အများစုကို ရှေ့နေမဟုတ်သူတွေ ဖတ်ရင် ဘာမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတယ်။ တကယ်တော့ အဲဒီလို မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ အရေးအပြော ရှင်းလင်းဖို့ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်သူတစ်ဦးအနေနဲ့ ရှေးဟောင်း သဘောထားတွေကို နည်းနည်းချင်း ဖဲ့ထုတ်ပစ်ပြီး အခြေအနေ ပိုကောင်းလာမယ်လို့ မျှော်လင့်ဖို့လောက်သာ တတ်နိုင်ပါတယ်။
ဥပဒေအသုံးအနှုန်းတွေဟာ ဘယ်လောက် ရှေးကျသလဲလို့ မေးရင် တော်တော် ရှေးကျပါတယ် လို့ ဖြေရမယ်။
နော်မန်ဒီဘုရင် ၀ီလီယံက ၁၀၆၆ ခုနှစ်မှာ အင်္ဂလန်ကို ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်တဲ့အခါ စစ်တပ်ကိုသာ ခေါ်ဆောင်လာတာ မဟုတ်ဘဲ ဘာသာစကားကိုလည်း ယူဆောင်သွတ်သွင်းခဲ့တယ်။
နောက် နှစ်တစ်ရာ နှစ်ရာ အတွင်းမှာ အင်္ဂလန်က ဥပဒေတွေကို ပြင်သစ်ဘာသာ၊ လက်တင်ဘာသာ တွေနဲ့ ရေးသားပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကတော့ တောက လယ်သမားတွေ သုံးတဲ့ ဘာသာစကားလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ ရလဒ်ကတော့ ဥပဒေတွေကို အခွင့်ထူးခံ အထက်တန်းလွှာတွေသာ နားလည်နိုင်တဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ ရေးသားထားခြင်းပါဘဲ။ ပြည်သူလူထုကြီးကို ဥပဒေအရာမှာ ဝင်မပါ နိုင်အောင် ဖယ်ထုတ်ထားတယ်။
၁၃၆၂ခုနှစ်မှာ Statute of Pleading (လျှောက်လဲခြင်း ဥပဒေ) ဆိုတဲ့ ဥပဒေထွက်လာတော့ အပြောင်းအလဲ နည်းနည်းဖြစ်လာတယ်။ အဲဒီဥပဒေမှာ နောင်အခါ ဥပဒေတွေကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့သာ ရေးသားရမယ်လို့ ဆိုထားတယ်။ ၁၄၂၂ ခုနှစ်ရောက်တော့ အင်္ဂလန်ဘုရင် ဆဋ္ဌမြောက် ဟင်နရီ ဟာ မိခင်ဘာသာစကားအဖြစ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို ပြောဆိုသူ ဖြစ်တယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီခေတ် ပညာရှင်တွေကြားမှာ ကြီးစိုးနေတဲ့ သဘောထားကတော့ လက်တင်ဘာသာစကားဟာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားထက် ပိုပြီး ချို့ယွင်းချက်ကင်းစင်တယ်၊ စာတတ်ပေတတ်ဆိုရင် ပြင်သစ်ဘာသာ တတ်တယ်လို့ ယူဆတယ်။ ဒါကြောင့် ရှေ့နေတွေဟာ သူတို့ရေးတဲ့ စာတွေထဲမှာ လက်တင်ဘာသာက ဝေါဟာရတွေ၊ ရှုပ်ထွေးတဲ့ ဝါကျ ဖွဲ့စည်းပုံတွေကို အားပါးတရ ထည့်ရေးကြတယ်။
၁၈ ရာစုရောက်တော့လည်း အခြေအနေက သိပ်မထူးသေးဘူး၊ လူမှုရေး ဒဿန ပညာရှင် လန်ဒန် ယူနီဗာစီတီကောလိပ်ကို တည်ထောင်သူ Jeremy Bentham က ရှေ့နေသုံးဆိုတဲ့ စာတွေဟာ အမှိုက်သရိုက် စာမျိုး “literary garbage” သာလျှင် ဖြစ်တယ် ဆိုပြီး ဥပဒေတွေ ရေးသားပုံ စာအရေးအသားကို ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ ဆော်သြခဲ့တယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ဒီဆောင်းပါးကို ရေးတဲ့ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်မှာ အခုဖော်ပြမယ့် သပွတ်အူဝါကျမျိုးတွေနဲ့ ပတ်ချာလည်နေရတုန်းဘဲ။
If there is material destruction of the Unit without fault of the Purchaser, this Contract shall be deemed cancelled in accordance with 16.3, unless Purchaser elects by Notice to Seller to complete the purchase with an abatement of the Purchase Price. ... Destruction shall be deemed “material” under ..., if the reasonably estimated cost to restore the Unit shall exceed 5% of the Purchase Price.
ဝယ်ယူသူ၏ ပြစ်ချက်ကြောင့် မဟုတ်မူဘဲ ပစ္စည်းတွင် သိသာထင်ရှားသော ချို့ယွင်းပျက်စီးမှုရှိလျှင် ဝယ်ယူသူက ရောင်းချသူထံသို့ ဝယ်ယူဈေးနှုန်းကို လျှော့ချစေပြီး ဝယ်ယူမှုကို ပြီးဆုံးစေရန် အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ခြင်းအား ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိလျှင် ဤနှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်ကို အပိုဒ် ၁၆-၃ အရ ပျက်ပြယ်ပြီးဖြစ်သည်ဟု ယူဆရမည်။ ... ချို့ယွင်းပျက်စီးမှုမှာ ပစ္စည်းကို မူလအနေအထားသို့ ရောက်ရှိစေရေး ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်သည် ဝယ်ယူဈေးနှုန်း၏ ၅% ထက် ကျော်လွန်ပါက သိသာထင်ရှားသော ချို့ယွင်းပျက်စီးမှုဟု ... အရ ယူဆစေရမည်။
(အင်တာနက်လိပ်စာ www.partyofthefirstpart.com/hallOfShame.html) တွင် ဖော်ပြထားသော Legalese Hall of Shame မှ)
အထက်ပါ စာပိုဒ်ရဲ့ ဆိုလိုရင်း အဓိပ္ပါယ်က ဒီလိုပါ။
If there is serious damage to the unit, and: 1) The purchaser did not cause the damage; and 2) It costs more than 5% of the purchase price to repair the damage, then the buyer can cancel the contract, or demandareduction in price.
ပစ္စည်းမှာ ကြီးမားတဲ့ အပျက်အစီး တစ်ခုခု ရှိပြီး (၁) ၀ယ်ယူသူကြောင့် ဖြစ်တာ မဟုတ်ရင် (၂) ပျက်တာကို ပြင်ဖို့ ၀ယ်ဈေးရဲ့ ၅% ထက်ပိုပြီး ကုန်ကျမယ်ဆိုရင် ၀ယ်ယူရေး သဘောတူ စာချုပ်ကို ၀ယ်သူဘက်က ပယ်ဖျက်နိုင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် ဈေးနှုန်း လျှော့ပေးဖို့ တောင်းဆိုနိုင်တယ်။
(Legalese Hall of Shame)
ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားတာဟာ နိုင်ငံတော်နဲ့ နိုင်ငံသားများရဲ့ အကျိုးစီးပွားတွေကို အကာအကွယ်ပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပဒေက အလုပ်အကျွေးပြုရမယ့် ပြည်သူလူထု အများစုက ဥပဒေ စကားအသုံးအနှုန်းတွေကို နားမလည်ဘူးဆိုရင် အဲဒီ ဥပဒေ ရေးသားပြုစုသူတွေ တာဝန်မကျေဘူးလို့ ဆိုရပါမယ်။ ဒါတင်မက နှစ်ပေါင်း တစ်ထောင်လောက် ခေတ်နောက်ကျနေပြီး အခွင့်ထူးထံလူတန်းစားကို ဇောင်းပေးတဲ့ သဘောထားတွေကို ဆက်လက်တည်မြဲနေအောင် ထိန်းသိမ်းရာလည်း ရောက်နေတယ်။
အထက်ပါဥပမာနဲ့ အခြားမရေမတွက်နိုင်တဲ့ ဥပမာတွေကနေ ရနိုင်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေကတော့
• ဥပဒေအရေးအသားကို နားမလည်ရင် ရေးတဲ့သူကို ရှင်းပြခိုင်းပါ။
• ရေးတဲ့သူက မရှင်းပြနိုင်ရင် ကိုယ်ရေးတာ ကိုယ်တိုင်နားလည်နိုင်ရဲ့လားလို့ မေးပါ။ ဒါမှမဟုတ် အသစ် ပြန်ရေးခိုင်းပါ။
• နားမလည်တဲ့ အရေးအသားကို လက်မှတ်ထိုးဖို့ ဒါမှမဟုတ် သဘောတူညီဖို့ တာဝန်မရှိဘူး။
• ဝေဝေဆာဆာ စကားလှအောင် သုံးနှုန်းထားတိုင်း လက်မခံနဲ့။ တကယ့်အလှက ရိုးရှင်းမှုမှာ ရှိတယ်။ ဘယ်တော့မဆို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရေးလို့ ရတတ်ပါတယ်။
အတော်ဆုံး ရှေ့နေတွေ အတော်များများကလည်း ရိုးရှင်းတဲ့ အရေးအသားဖြစ်ဖို့ ဆော်သြကြပါတယ်။ လောကကြီးက နဂိုကမှ ရှုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီလို ရှေ့နေမျိုးတွေဆီမှာသာ အမှုအပ်ကြပါ။
Guy Perring ၏ Lamentable Legalese အားဆီလျော်သလိုဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင် ရေးသားထားသော မူလဆောင်းပါးနှင့် အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆောင်းပါးများအား ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။)
အထက်ပါ ဆောင်းပါးအားကူးယူ၍ အခြား website နှင့် blog များတွင် တင်မည်ဆိုပါက www.myanmar-network.net/forum/topics/lamentable-legalese မှကူးယူကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးပါရန်။
Permalink Reply by Aye Khaing on February 10, 2012 at 10:54
Permalink Reply by Rozar on February 10, 2012 at 12:47
i would like to know the word "degree" with law terms.
Permalink Reply by Moe Thuzar Oo on February 29, 2012 at 17:51
In law terms, the word " decree" is used. It is the formal expression of the conclusive rights of the parties(clients) in
the civil suit.
Permalink Reply by Ratan Biswas on February 10, 2012 at 19:25
Permalink Reply by AYOOB AKHOON on February 10, 2012 at 19:25
mingalar bar sayar
Permalink Reply by 3geoxpom1u8xo on February 10, 2012 at 20:37
Permalink Reply by Master Learner on February 11, 2012 at 10:43
Good ! Now I am studying Legal Studies at www.Alison.com .
Permalink Reply by zaw phyo naing on February 11, 2012 at 23:27
That's right. Once, William Shakespear said " Good English is Simple English." Thank you.
Permalink Reply by win win shwe on February 17, 2012 at 10:15
Permalink Reply by Moe Thuzar Oo on February 29, 2012 at 17:48